.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: စာလုံး လှလှလေးတွေ ရေးဖို့ FlaX 5.10
ဖလက်ဆောင်းဝါသနာတူ ဘော်ဒါတွေနဲ့ စာလုံး ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေ ရေးချင်တဲ့ သယ်ရင်းတွေ အတွက်
အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးရေးလို့ ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။ မြန်မာလိုလဲရေးလို့ရတယ်။
အောက်မှာနမူနာလေးတွေ ရေးပြထားပါတယ်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုလဲ ပြထားပါတယ်။
ကိုယ့်တိုင်လုပ်ဖလက်ဆောင်လေးတွေမှာ နာမည်လေးတွေ၊ သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေ ရေးဖို့ကောင်းပါတယ်။
ရေးလို့ ရတဲ့စာလုံးဒီဇိုင်းပေါင်းကလဲ 100 ကျော်ပါတယ်ဗျ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကလဲ 731.9kb ထဲပါ၊
"FlaX will help you quickly and easily create text effects for Flash, and does that real-time"
အသုံးပြုနည်းလေးကတော့ အောက်မှာပါ။ သိပ်မမြင်ရရင် ထပ်ကလစ် ကြည့်လိုက်ပါရန်။
Download: စာလုံး လှလှလေးတွေ ရေးဖို့ FlaX 5.10
ဒီပို့စ်လေးက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ခေတ်သစ်မောင် ရေးတင်ထားတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။